प्रतिभा रि’सले आ’गो हुँदै बखतलाई यति सम्म भनिन्; म कुनैपनि हालतमा मिल्दिन (भि’डि’यो हेर्नुस) – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Video/प्रतिभा रि’सले आ’गो हुँदै बखतलाई यति सम्म भनिन्; म कुनैपनि हालतमा मिल्दिन (भि’डि’यो हेर्नुस)
केही समयअघि युट्युबमा एक जोडी खुब भाइरल भएका थिए । तर यी भाइरल जोडी बखत बहादुर बिष्ट र प्रतिभा बिष्ट आजभोली त्यति देखिएका छैनन् । यी दुईको अचम्मको जोडि भएका कारण यी दुई सबैको नजरमा पर्न सफल भए । बखत उमेरमा २६ वर्षभएतापनी उचाईमा उनी निकै होचा छन् । उनका तुलनामा उनकी श्रीमती उमेरमा कान्छी तर बखतभन्दा ठूली छिन् । यी जोडीहरुले भागेर विवाह गरेका हुन् ।
बखतलाई पहिले-पहिले सानो भनेर सबैले हे’प्ने गर्थे तर प्रतिभाले त्यस्तो केहि नसोची बखतलाई साथ थिइन । केही समय अघि यी दुईबीच अथाह प्रेम रहेको थियो । यी जोडीले केही म्युजिक भिडियो समेत खेलेका थिए । तर अहिले बखत आफ्नी श्रीमतीले कु,ट,पि,ट गरेको भन्दै मिडियामा आएका छन ।
त्यसपछि टाइम्स खबर नेपालका पत्रकार हिमेश न्युपाने प्रतिभालाई फोन गरेका थिए । फोनमा प्रतिभाले बखत संग कुनैपनी हालतमा पुनर्मिलन नहुने कुरा व्यक्त गरेकि छिन । अत: बाँकी कुरा भि,डि,योमा हेर्नुहोला।
यो पनि पढ्नुहोस् :प्रधानमन्त्री ओलीले भने- ‘सरकारले संविधान मिच्दैन र मिच्न दिँदैन’!!:प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार जनमतको भावना विपरित नजाने बताएका छन् ।आज ७१ औँ प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतेृत्वको सरकारले संविधान नमिच्ने र मिच्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
‘अहिलेको सरकारले लोकतान्त्रिक बाटो बिराउँदैन, संविधान मिच्दैन र मिच्न दिँदैन । जनताको अभिमतभन्दा विपरीत जाँदैन र जान दिँदैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।प्रधानमन्त्री ओलीलेजनअनुमोदित प्रक्रियाको बाटोमा जाने र देशलाई अस्थिरताबाट जोगाउनको लागि आफूले नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेको बताए ।
साथै तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।त्यस्तै सानातिना मतभेदलाई छोडेर बृहत्तर हितमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।
श्रीमानबाट ता’तो तेल ख नाईएकी पुजा यस्तो अब स्थामा, आमाले खोलिन् भि त्री कुरा
महिलाले छोरालाई आरोप लगाउने कारण यस्तो रहेछ, पहिलो पटक खोले यथार्थ ! (भिडियो)
अन्तिम मा भयो यस्तो निर्णय छोरिकै लागि मिलेर बस्ने || ( भिडियो सहित )